Izikolo ezili-13 zeZikolo zeNjineli eziBalaseleyo kwiLizwe. 2022
Izikolo ezili-13 zeZikolo zeNjineli eziBalaseleyo kwiLizwe.
Ubunjineli bekhompyuter yenye yezona ndawo zikhokelayo kwihlabathi kwaye uninzi lwabafundi lufuna ukuqinisekiswa kwindawo yokufunda kwaye kubalulekile ukuba uyifunde kwindawo elungileyo kwaye eli nqaku libonelela ngeenkcukacha ezipheleleyo kwizikolo ezili-13 zeekhompyuter zobunjineli kwihlabathi ukuba ukhethe kwaye uqale uhambo lwakho lokuba ngumfundi wobunjineli oqinisekisiweyo ngokupheleleyo.
Ubunjineli bekhompyuter yenye yezona zifundo zifunwa kakhulu kwihlabathi namhlanje. Indima yekhompyuter kwindaleko kunye nophuhliso / ukuqhubela phambili kwehlabathi namhlanje ayinakujongelwa phantsi. Ibandakanya isebe lobunjineli elidibanisa iinkalo ezininzi zesayensi kunye nobunjineli bobuchwephesha obufunekayo ukuze kuphuhliswe izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware.
Zininzi izibonelelo zekhompyuter zobunjineli: umvuzo omangalisayo, ukhuseleko lomsebenzi kunye nendalo yobukrelekrele kunye nezinto ezintsha.
Ngelixa ulikho ungajonga eli nqaku kwi Izikolo zobunjineli ezilungileyo kwihlabathi kunye neengxowa-mali Ngale nto unokukwazi ukufunda ikhosi yobunjineli oyikhethile ngaphandle kokukhathazeka malunga nenkxaso mali.
Unokufunda ngokulinganayo ikhosi yobunjineli enje ngobunjineli bekhompyuter nakwesiphi na esona sikolo siphezulu sase-Canada se-5 nakwisifundi, ukwazi okungakumbi ngenkcukacha ezipheleleyo APHA
Kule mihla, iiNjineli zeKhompyuter zikwimfuno ephezulu njengoko izinto ezininzi ezintsha zisoloko ziphuma ngemini. Iinjineli zekhompyuter zisebenza ngokufanelekileyo kunye nezixhobo kunye nesoftware kwaye ziqinisekisa ukuba zombini zidityanisiwe.
Ngaphandle kokuqhubeka, masiqhubeke nezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi
Izikolo ezili-13 eziPhambili zeZikolo zeNjineli zeKhompyutha kwiLizwe
I-Massachusetts Institute of Technology
IYunivesithi yaseCalifornia, eBerkeley
IYunivesithi yase-Illinois Urbana Champaign
IYunivesithi yaseMichigan Ann Arbor
IYunivesithi yaseTexas Austin (Cockrell)
IYunivesithi yePurdue Lafayette Indiana eUnited States
KwiYunivesithi yaseCalifornia Berkeley
IYunivesithi yePurdue Lafayette
Eyasungulwa ngo-1861 ngaphandle kweBoston eCambridge Massachusetts, i-MIT yitrailblazer. Inendawo yokuhlala edolophini kwaye imalunga neehektare ezili-166. I-MIT yaziwa ngokubanzi ukuba sisikolo semathematika, ikhompyuter, isayensi kunye nobunjineli kunye noosiyazi, akumangalisi ukuba isikolo sesona sikolo sobunjineli siphambili emhlabeni kwaye ikakhulu sesona sikolo sobunjineli bekhompyuter emhlabeni.
Imali yokufunda yabafundi eMIT yi- $ 53,790. Inani lilonke lobhaliso okwangoku yi-4,602 kwaye linokutshintsha. Ngalo naliphi na ixesha. Bangqongqo kakhulu ngokwamkelwa kuba banenani eliphezulu lezicelo minyaka le. Inxalenye yento efunekayo linqaku le-SAT elimalunga ne-1500 ukuya kwi-1570 kwaye kungenjalo amanqaku e-ACT aphakathi kwama-34 nama-36. Uninzi lwabagqatswa abaphumeleleyo bafumana unyaka nonyaka.
Abanye abantu bacinga ukuba ikota enye yabafundi abangena minyaka le inqaku elingaphezulu kwenqaku kunye nekota enye inqaku elingaphantsi kwenqaku ngokunjalo. Imali yesicelo kwi-MIT yi- $ 75. I-MIT okwangoku ikwinqanaba le- # 3 kwiiDyunivesithi zeSizwe, # 30 kwezona zikolo zifundisa kakuhle, # 4 kwizikolo ezinexabiso eliphezulu Ama-92% abafundi be-MIT bahlala kumagumbi okulala xa i-8% ihlala kwindawo yokuhlala ngaphandle kwekampus.
Ndwendwela isikolo here
Ngokwenqanaba leyunivesithi yehlabathi i-2020, iYunivesithi yaseStanford yeyona yesibini ilungileyo kwinkqubo yobunjineli bekhompyuter kwihlabathi okwangoku.
Iyunivesithi yabucala enenani lilonke labafundi abamalunga ne-16,233 kunye nabasebenzi bezemfundo be-4,478 ebhodini. Ime kwiikhilomitha ezingama-35 kumazantsi eSan Francisco nakwiimayile ezingama-20 kumantla eSan Jose kwaye isembindini wentshona yeCalifornia eSilicon Valley, likhaya laseYahoo, uGoogle, uHewlett Packard kunye nezinye iinkampani eziseMelika.
Ngenye yezona khampasi zikhulu zaseyunivesithi eMelika nakwihlabathi liphela malunga ne-8,180acres yomhlaba. Kukho malunga ne-18 yamaziko ophando ahlukeneyo eStanford ebenza ukuba babaluleke kakhulu kuphando nakwizilingo. Uninzi lwabafundi baseStanford ngabantu abaphezulu kwihlabathi elibangqongileyo nakwihlabathi jikelele. IStanford inenkqubo yokufunda iminyaka emine yobunjineli bekhompyuter.
Abafundi bavezwa kukufunda ngokubanzi kumacandelo abo. Ukwamkelwa kwisikolo sobunjineli beekhompyuter, abafundi banokukhetha ezona ziphambili emva konyaka wabo omtsha. Inkqubo yesicelo ibandakanya ukungeniswa kwamanqaku e-SAT okanye e-ACT, ingxelo yesikolo kubandakanya ileta yengcebiso evela kumcebisi wesikolo esiphakamileyo, iileta zokucebisa ezivela kootitshala, incoko ngesihloko esinikiweyo njengoko kufunwa yiyunivesithi kunye nesicelo esingabuyiswayo se- $ 90 .
Le yenye yeekholeji eMelika apho bonke abafundi abaphumeleleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo bangathanda ukuya khona. Bagcina umhla wokugqibela wesicelo ngoJanuwari 6 ngemali yabo yesicelo eyi- $ 120 kubahlali base-US kunye ne- $ 140 yabafundi bamanye amazwe.
Umlinganiso wabo we-2019 ye-PhD yomfundi ye-faculty yi-5: 5: 1 kunye nezifundo e-UC Berkeley yi- $ 11,442 ngonyaka kwabafundi abasisigxina kunye ne- $ 26,544 ngonyaka kubafundi abasisigxina. Ikholeji yobunjineli inamaziko ophando amalunga nama-40 apho abafundi bachitha ixesha lokufunda kunye nokwenza izinto ezintsha. I-UC Berkeley kunye neStanford bobabini banethayi njengesikolo sobunjineli sesibini esona sihamba phambili emhlabeni.
Le yunivesithi ibekwe ePittsburgh, PA. Okwangoku zikwindawo yesine kwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi ngoku. Bamalunga ne-4,112 ababhalise ngokusisigxina kubunjineli beekhompyuter ngoku kunye nezifundo eCarnegie Mellon zi- $ 48,500 ngonyaka zabafundi abasisigxina kunye ne- $ 2,022 ngonyaka yabafundi abasisigxina. Umhla wokugqibela wesicelo uhlala u-Januwari 31.
Imali yesicelo yi- $ 75 kubahlali base-US kwaye iyafana nakwabafundi bamanye amazwe. Umlinganiso womfundi we-PhD kukho i-4: 8: 1 kwaye kukho malunga ne-297 yexesha elizeleyo kubasebenzi. Abafundi bezobunjineli beekhompyuter kwiYunivesithi yaseCarnegie Mellon bahlala bezimisele kuphando nakwimisebenzi yokufunda kunye nomxube wobomi boluntu nabo.
Isikolo sise-1308 W. Green Street, e-Urbana, e-Illinois. Inani lesihlanu kwezona zikolo zibalaseleyo zekhompyuter kwihlabathi. Imali yesicelo yi- $ 70 kubahlali base-US kunye ne- $ 90 yabafundi bamanye amazwe.
Isifundo yi- $ 18,622 ngonyaka yabafundi abasisigxina (in-state) kunye ne- $ 35,458 ngonyaka yabafundi abasisigxina (ngaphandle korhulumente). Ikholeji yobunjineli inabasebenzi abasisigxina abangama-453.
Enye yeeyunivesithi ezidumileyo emhlabeni ezaziwa ngokuzibandakanya kwakhe kunye nokuzibandakanya okunzulu kuphando, ukuphuculwa kwesayensi kunye nophuhliso, ibekwe eAtlanta eMelika yaseMelika.
Imali yesicelo yi- $ 75 kubahlali baseMelika kunye ne- $ 85 yabafundi bamanye amazwe. Isifundo kwiziko lobuchwephesha laseGeorgia yile: $ 14,064 ngonyaka ngabafundi abasisigxina; $ 29,140 ngonyaka ngabafundi abasisigxina abasebenza ngokusisigxina; I-586 yeedola ngekhredithi yabafundi abakwisimo sexeshana sikarhulumente; I-1,215 yeedola ngetyala labafundi abasisigxina abaphuma ngetyala.
Umlinganiso wabo we-PhD yomfundi ye-faculty ye-4: 4: 1. Abafundi bobunjineli beekhompyuter izandla zabo zihlala zisemgceni zisenza uphando kwaye bafunda izimvo ezintsha banokugqiba izifundo zabo kwizifundo zobugqirha. Okwesithandathu kuluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi.
Ifumaneka kwiziko lobunjineli likaLurie H. u-Ann Arbor Michigan, libopha iqhina kunye neziko lobuchwephesha lase-Georgia njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi. Kukwindawo yesine kwizikolo eziphambili zobunjineli.
Isikolo sinomhla wokugqibela wokufaka izicelo minyaka le, kwaye umrhumo wesicelo uyi- $ 75 kubahlali base-US kunye ne- $ 90 yabafundi bamanye amazwe. Imali yokufunda ixesha elipheleleyo: $ 27,202 ngonyaka (kwi-state); Ixesha elipheleleyo: $ 51,126 ngonyaka (ngaphandle kwimeko); ixesha lesithuba: $ 1,469 ngetyala (kwi-state); kunye nexeshana: $ 2,798 ngekhredithi (ngaphandle-kurhulumente). Umlinganiselo we-PhD 2019 womfundi-we-faculty 4: 6: 1. Ngaphandle kwegumbi lokufundela, abafundi baya kuhlangana kwaye baphumle.
Esi sesinye isikolo esithandwayo kakhulu se-Ivy League eMelika. Ime kwi-C230 yobunjineli iQuadrangle ePrinceton New Jersey, eMelika. Ukufaka isicelo kuyo nayiphi na injineli enkulu ePrinceton iphela ngoDisemba 1 minyaka le. Umyinge we-PhD womfundi we-faculty ratio ePrinceton yi-4: 3: 1.
Umhla wokugqibela wesicelo yi- $ 90 kubo bobabini abahlali base-US nakwabahlali bamanye amazwe. EPrinceton, mininzi imibutho ephumeleleyo yokujoyina unyaka nonyaka emva kokuba abafundi begqibe iinkqubo zabo. Enye yazo yabafundi bobunjineli ziinjineli ezingenamida. Uninzi lwabafundi bahlala kwikhampasi emalunga neyure ukusuka eNew York nasePhiladelphia. Yinto yesibhozo kuluhlu lwezikolo zobunjineli eziphezulu kwihlabathi.
Kufumaneka eCarlifonia boulevard. Umhla wokugqibela wesicelo ngu-Dec 15, ngelixa umrhumo wesicelo uyi- $ 100 kubo bobabini abahlali nakwabafundi bamanye amazwe. Banobhaliso malunga ne-536 yeKholeji yobunjineli kunye ne-100 yabasebenzi abasisigxina kwiikholeji zobunjineli.
Umlinganiselo we-2019 PhD-faculty ratio yi-5: 1: 1. Abafundi banenkululeko yokuzibandakanya kumaziko ophando ekhampasi kwizifundo zabo kunye novavanyo nangona benesikhokelo.
Lo ubopha iqhina kunye neCALTECH njengesi-105 kuluhlu lwezikolo zobunjineli eziphezulu kwihlabathi. Isicelo sivula minyaka le ngentlawulo yesicelo ye- $ XNUMX kubo bobabini abahlali base-US kunye nabafundi bamanye amazwe.
Isifundo yi- $ 29,500 ngonyaka yabafundi abasisigxina kunye ne- $ 2,356 ngekhredithi yabafundi abasisigxina. Umyinge we-PhD womfundi we-faculty kwiCornell yi-4: 9: 1. Ikholeji yonke yobunjineli ine-235 yexesha elizeleyo kubasebenzi. Ime kwi-242 iholo lokuchwela, Ithaca eNew York.
Le yeyona yunivesithi iphezulu eMelika. Ipateni yokufundisa kwiDyunivesithi yaseTexas yahlukile kubo; bavumela abafundi ukuba bacinge ngaphandle kwebhokisi eklasini kunye neelebhu zabo ezibonakalayo.
Banomhla wokugqibela wokufaka isicelo kunye nomrhumo wesicelo se- $ 65 kubahlali base-US kunye ne- $ 90 yabafundi bamanye amazwe. Isifundo saso sisisigxina: $ 10,554 ngonyaka (kwi-state) kunye nexesha elipheleleyo: $ 19,320 ngonyaka (ngaphandle kwe-state).
Umyinge we-PhD womfundi we-faculty kwi-University of Texas yi-5: 1. Isikolo soBunjineli sinenani elilungileyo lamaziko ophando kunye ne-310 yexesha elizeleyo kubasebenzi. Isikolo seshumi elinanye kuluhlu lwezona zikolo ziphambili zobunjineli beKhompyuter kwihlabathi.
Le yunivesithi yophando yoluntu eWest Lafayette. Sasekwa ngo-1869. Esi sikolo sibonelela ngaphezulu kwama-200 aphezulu kwizidanga zokuqala, ngaphezulu kwe-69 yeenkosi kunye neenkqubo zobugqirha, ngaphezulu kwe-900 yemibutho edibeneyo kwaye inxulunyaniswe namabhaso ali-13 kaNobel.
Ikholeji yobunjineli yasungulwa ngo-1876 ithathwa njengokwahlulwa kweCarnegie kwamaziko emfundo aphakamileyo ukuba abe nemisebenzi yophando ephezulu kakhulu. Isikolo sinethala leencwadi kunye neendawo zokugcina izinto. Ikholeji yobunjineli inomhla wokugqibela wesicelo kunye nomrhumo wesicelo se- $ 60 kubahlali base-US kunye ne- $ 75 yabafundi bamanye amazwe.
Isifundo kwi-Purdue yi- $ 10,330 ngonyaka kubafundi bexesha elizeleyo; $ 29,132 ngonyaka ngabafundi abasisigxina abasebenza ngokusisigxina; I-329 yeedola ngetyala labafundi abakwisimo sexeshana sikarhulumente; $ 929 ngekhredithi ngabafundi abakwimeko yexeshana abangaphandle kurhulumente. Umlinganiso wokugqibela we-PhD yomfundi-yecandelo le-5: 7: 1. Ikwindawo yeshumi elinambini kwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi.
Le yenye yeeyunivesithi ezidumileyo eMelika nakwihlabathi liphela. Ime eSeattle Washington. Okwangoku ilishumi elinambini kuluhlu lwezikolo eziphezulu zeKhompyuter kubunjineli kwihlabathi ecaleni kwePurdue University Lafayette.
Imali yesicelo kwiYunivesithi yaseWashington yi- $ 85 kubahlali base-US kunye nabafundi bamanye amazwe. Isifundo sisisigxina: $ 18,198 ngonyaka (kwi-state); Ixesha elipheleleyo: $ 32,439; Ixesha lexeshana: i-867 yeedola ngetyala (kwi-state) kunye nexeshana: $ 1,545. Umlinganiselo we-2019 PhD-faculty ratio ngu-3: 6: 1. Abafundi abaphumeleleyo bathambekele ekujongeni uluhlu olubanzi lwamathuba ophando. Zininzi izinto zokuthatha inxaxheba kwi-UW.
Oku kuzisa isiphelo kwezona zikolo zili-13 zibalaseleyo zobunjineli bekhompyuter kwihlabathi esele inegalelo kwinkqubela phambili yehlabathi kwaye ziqinisekile ukukhulisa amandla akho kwaye zikwenze ube yinjineli yekhompyuter esebenzayo ngokupheleleyo.
Unokufuna ukufumana izakhono zekhompyuter kwi-intanethi kwaye inqaku elipapashwe ngokupheleleyo kwi Iikhosi ezili-13 zasimahla zasekhompyutheni ezinesatifikethi ukuba ukhethe ekukhuliseni izakhono zekhompyuter kwaye iikhosi zasimahla.
Ukufumana izakhono zekhompyuter kuyakukunceda ngakumbi kubasebenzi okanye ukuqala ikhondo lomsebenzi omtsha kwaye akukho mda kwizakhono onokuzifumana njengoko ziya kukunceda ngakumbi phambili, jonga eli nqaku Iikhosi ezili-13 zoqeqesho kwi-Intanethi zabafundi nabasebenzi, ezi zifundo ngokuqinisekileyo ziya kukuthatha ngakumbi njengokukunika inkuthazo kwindawo osebenza kuyo okanye ukuthatha ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo.
Izifundo zasimahla zeKhompyuter kwi-Intanethi ezinesiQinisekiso
Iikhosi ze-13 zasimahla zoBunjineli boMatshini
ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli beekhompyuterEzona zikolo ziBunjineli zeKhompyuter kwiLizwe liphelaIzikolo zezoBunjineli zeKhompyutha ezilungileyoIzikolo zeNjineli eziCetyiswayo kwiHlabathi liphelaIzikolo eziPhezulu zezoBunjineli zeKhompyutha kwiLizwe
Post Previous:Ulwabiwo-mali lukaRhulumente lwe-10 lokuFunda kwelinye ilizwe ngesicelo sasimahla
Okulandelayo Post:Ubungcali obuphezulu be-8 kwi-Theological Studies eKorea
Pingback: I-10 yeeNyuvesi zeNzululwazi zeKhompyutha eYurophu 2021